Fitaovana famakafakana Semalt
Mifandraisa amin'ny Semalt
Te hanana toerana ambony amin'ny Google ve ianao? Semalt.net no vahaolana tonga lafatra ho an'ny orinasanao. Manana fitaovana mahery indrindra izy io mba hanome anao ambony indrindra amin'ny Google. Ilay mpampiasa dia sariaka sy mahay intuitive. Amin'ny fomba fijerinao dia manana izay rehetra ilainao mba hahombiazanao amin'ny fantsona ianao.
Ireo fitaovana famakafakana Semalt dia mora miditra amin'ny tranokala. Azonao atao ny mahita ireo vokatra tsy maintsy atolony, bebe kokoa momba ny orinasa ray aman-dreny, ny tantaran'ny fahombiazany sy ny safidy isan-karazany mba hifandraisana amin'izy ireo. Manana safidy ianao hidirana na hamorona kaonty amin'ny Semalt.net. Manampy anao hamonjy ireo tetikasan'ny SEO anao ao amin'ny Semalt ny famoronana kaonty.
TOKONY HAFA SEMALT
Ny analytics Web dia misy ny fanangonana, ny tatitra sy ny famakafakana ny angona tranonkala. Izy io dia dingana sarotra izay manampy hahitana raha manatratra ny tanjony sy ny tanjony ny tranonkala. Avy amin'ny angon-drakitra, dia misy ny paikady tsara kokoa amin'ny fanatsarana ny tranokala avy eo. Ny fitaovana famakafakana Semalt no fitaovana matanjaka indrindra hanampiana anao hanao ireo bebe kokoa.
Ny fitaovana famakafakana Semalt dia mizara ho fizarana 4.
Amin'ity fizarana ity dia hahita ireo fitaovana ilaina amin'ny famakafakana feno ny tranonkalanao ianao. Ny fizarana SERP dia misy famandrihana telo.
a. Teny fanalahidy ao amin'ny TOP: Eto ianao dia hahita ny isan'ny teny manan-danja ao amin'ny tranonkalanao ao amin'ny Google TOP 1-100 voajanahary fikarohana raha oharina amin'ny daty teo aloha. Azonao atao ihany koa ny mahita tabilao izay mampiseho ny isan'ny teny manan-danja ao amin'ny Google TOP rehefa mandeha ny fotoana. Miaraka amin'ity fitaovana ity, azonao atao ny mandinika ny fiovana amin'ny isan'ny teny fototra ao amin'ny tranokalaninao ao amin'ny TOP. Farany, afaka jerena ny pejy laharana ao amin'ny tranonkalanao sy ny toeran'ny SERP misy azy amin'ny teny fanalahidy manokana.
b. Pejy tsara indrindra: Eto, homena saina ianao momba ireo pejy mahomby amin'ny fifamoivoizana tsara indrindra. Hahita tabilao mampiseho ny fiovana eo amin'ny isan'ny pejin-tranonkala ianao amin'ny TOP hatramin'ny nahitana ny tetik'asa hatramin'ny daty. Ianao koa dia ho afaka hahafantatra ny isan'ireo pejy tranonkala ao amin'ny Google TOP 1-100 vokatry ny fikarohana organik, raha oharina amin'ny daty mialoha. Azonao atao koa ny mihevitra azy io ho toy ny tabilao bara raha toa ny famintinana tsy tapaka isa. Misy tabilao iray hafa hahafantaranao ireo fiovana ao amin'ny isan'ny teny voafidy ao anaty pejy natokana ho an'ny TOP hatramin'ny datin'ny fandefasana ny pejinao.
c. Fifaninanana: i Semalt dia manome anao fahalalanao amin'ny tranokalan'ny mpifaninana aminao mba hahafahanao mianatra azy ireo ary hanitsy ny drafitr'asanao ankehitriny. Manampy anao hahita ny tranokala rehetra izay ao amin'ny Google TOP 1-100 ho an'ny teny fanalahidy izay mitovy amin'ilay toerana misy ny tranonkalanao. Ho aseho anao koa ny toerana mitazona ny tranonkalanao eo amin'ireo mpifaninana aminao. Homena anao ny fahitana ny isan'ireo teny fanalahidy ifampizaràn'ny mpifaninana voafidinao ao amin'ny TOP. Hahita latabatra iray ianao ahitanao ny isan'ny teny zatra nizara izay nomen'ny tranonkalanao sy ny mpifaninana aminao ao amin'ny Google TOP. Avy amin'ity latabatra ity, ny fanarahana ny fahasamihafan'ny isan'ny teny manan-kaja raha oharina amin'ny daty iray teo aloha dia ho mora.
Zava-dehibe aminao ny hahafantaranao raha mihevitra ny Google ny tranokalanao na tsia. Ny olon-kafa dia afaka nandika ny votoatin'ny pejin-tranonkalanao ary raha haingana kokoa ny fanondroana azy ireo dia hotsidihan'ny Google ny tranokalanao, ary hosoratany an-tsoratra ny loharanon'ny atiny. Te hanara-maso izany ianao satria manasazy ireo tranokala manana andian-dahatsoratra maro be ny Google. Ho hitanao eto raha jerena ny tranonkalanao toy ny loharano tokana na tsia ny Google. Semalt.net dia ahafahanao mijery ny salan'isa mampiavaka anao mba hanampiana anao hahafantatra raha toa ka tsy manam-paharoa ny tranokalanao na tsia. Ny isa 050% dia zavatra tsy ilainao - izany no midika fa mihevitra ny pejin-tranonkalanao ny Google. Ny salan'isa 51% -80% dia midika fa mieritreritra i Google fa ny pejin-tranonkalanao no nanoratra indray. Isa iray izy ity fa afaka manampy anao hanao tsara kokoa i Semalt. Ny isa an'ny 81% -100% dia marika fanao tsara fa manao zavatra tsara ianao eto. Google dia mihevitra ny maha-tokana ny atiny. Manatsara ny toeranao izany.
Hahita fitaovana "votoaty" ianao izay manampy anao hahita ny atiny rehetra izay hitan'i Google amin'ny tranokalanao. Nasongadiny ihany koa ireo ampahany avo roa heny ny votoatin'ny pejin-tranonkalanao.
Fitaovana iray hafa ho hitanao fa mora ny fitaovana "loharano loharano" natokana hananganana ireo tranonkala rehetra raisin'i Google ho loharanom-pejy amin'ny pejinao. Maneho anao aza ny tena faritra misy ny votoatinao izay hita amin'ireo tranokala hafa ireo mba hahafahanao mijery ireo faritra ireo mba hanamafisana kokoa ny laharam-pahamehanao. Semalt dia ekipa mpanoratra matihanina afaka manampy anao hanao ny votoatin'ny pejinao ho tsy manam-paharoa araka izay azo atao. Afaka mifandray izy ireo amin'ny semalt.net.
Rehefa avy miditra amin'ny kaontinao Google ianao dia hanana fidirana amin'ny fitaovana webmaster Google. Ao amin'ity fizarana ity dia ho hitanao ny fisehoan'ny tranonkalanao amin'ny valin'ny fikarohana ao amin'ny Google. Hanampy anao hamantatra ireo olana momba ny fanindriana. Ho afaka handefa ny tranokalanao sy sitemaps ianao ianao amin'ny alàlan'ny lisitra iray manontolo ary mangataka ny fanondroan'izy ireo avy amin'ny Google.
Ho afaka manana metika ianao izay milaza ny fahombiazan'ny tranonkalanao. Manampy anao izany hamantatra izay ataonao tsara sy ireo zavatra ratsy ireo izay manakana ny tranokalanao tsy hiditra ao amin'ny Google TOP 1-100.
Ny fitaovana sitemap dia ahafahanao mametraka ny sitemapn'ny tranonkalanao amin'ny Google mba hahafahanao mahafantatra hoe iza amin'ireo sitrapony no voatonona sy ireo manana lesoka.
Hafainganana ny pejy
Ny mpandinika ny hafainganam-pandeha pejy dia fitaovana matanjaka izay mampiseho ny fotoana fampidiran'ny pejinao, ny isan'ny mpanam-pahombiazana anananao ary ny isan'ny fahadisoana amboarina. Ity fitaovana ity dia manome anao isa isa ny tombantomban-tsasatra ho an'ny takelaka desktop sy finday ho an'ny pejinao. Ny hafaingam-pandeha amin'ny tranokalanao dia misy fiantraikany amin'ny filaharanao, ka tsy misy vidiny ity fitaovana ity.
Ny isa ny 0-49 dia maneho ny hafainganam-pandeha tena haingana. Ny isa iray amin'ny 50-89 dia manondro haingam-pandeha amin'ny hafainganam-pandeha avo indrindra amin'ny 90-100.
Semalt dia manome anao fahitana amin'ny hoe ahoana ny fomba maha-olona iray ny tranonkalanao amin'ny alàlan'ny fanahafana ny fizotran'ny lozisialy ao amin'ny efijery desktop ary amin'ny findainao. Manampy anao izany hanoro anao ny fomba nanatsarantsika ny tranokalanao ho an'ny fampiroboroboana Google SERP.
Rehefa miditra amin'ny kaontinao ianao, dia nalaina tamina dashboard izay hahitanao safidy hampiasa sivana mba hahitana ireo zavatra ilaina ilainao ary hahazo angon-drakitra ankehitriny. Azonao atao ny mikarakara ny tetikasanao amin'ny alàlan'ny fidirana slà. Manana safidy ihany koa ianao hamolavola ny tetikasanao amin'ny alàlan'ny fepetra isan-karazany hanaraha-maso ny fivoaran'ny tranonkalanao.
Semalt dia manolotra vokatra tsara indrindra ho an'ny fananganana SEO tsara anao. Ny vokatra voatanisa dia misy:
AutoSEO: Manampy anao hanome safidy tsara ny tranokala tsara kokoa izany, hanatsarana ny fahitana ny tranonkalanao, manampy hisarihana ireo mpitsidika vaovao ary hampitombo ny fanatrehanao an-tserasera. Ny serivisy AutoSEO Semalt dia manome ho an'ny faharoa.
SEO feno: Miaraka amin'ny SEO feno, Semalt dia manome anao optimization tranokala tsara, ROI tsara, manampy anao mametraka vola amin'ny hoavinao am-pahendrena sy hanome valiny haingana sy mahomby ary lava kokoa. Azonao atao ny misy laharana eo amin'ny tranokala Google 100 100 rehefa manomboka ny fanentanana feno SEO anao miaraka amin'ny Semalt ianao.
E-commerce SEO: Tsy hahita SEO fampiatoana tsara kokoa ho an'ny tranonkalanao E-commerce ianao fa tsy SEO-SEO SEO. Semalt no manao ny asa ho anao - entin'izy ireo ny mpanjifa! Manampy amin'ny fampiroboroboana ny teny fanalahidy ambany dia mampitombo ny fahitana amin'ireo mpitsidika izy ireo, manome valin-kafatra niche anao izy ary ny valim-pifidianana ihany no ataonao.
Famakafakana: Ny fitaovana momba ny tranokala Semalt dia manampy anao manara-maso ny tsenanao, manara-maso ny toeran'ny mpifaninana aminao mifandray amin'ny anao ary izy ireo dia manolotra fampahalalana momba ny raharaham-barotra momba ny fandraharahana feno. Ho hitanao koa ny tsena vaovao. Manampy anao aza izy ireo hampiova ny data-nao ho endrika PDF sy EXCEL - mpamonjy aina toy izany!
SSL: Semalt no manome antoka ny tranokalanao. Izany no miantoka ny fiarovana ny tsiambaratelon'ny mpampiasa anao. Hanana mpitsidika maro kokoa avy amin'ny Google ianao ary manome tsipika maitso ny Google Chrome.
Rehefa avy nandinika ireo fitaovana sy vokatra tao amin'ny Semalt.net isika dia hihaona amin'ny Semalt lalina kokoa.
Eto ianao dia mahita ny ekipa mahomby momba ny manampahaizana azy ary mahita ny fijeriny ny toeram-piasan'izy ireo.
Ny vokatra Semalt dia somary lafo vidy satria tena iriny hahomby ny orinasanao. Misy ny drafitra ho anao raha te hampiasa ny serivisinao isam-bolana ianao, isaky ny 3 volana, 6 volana na isan-taona.
Ny mpanjifan'ny Semalt dia finiavana mandao ny famerenana ny tahan'ny fiovam-po ambony izay nananany hatramin'izay nanankinany ny orin'izy ireo ho eo an-tànan'ny fiarovana an'i Semalt.
Ny bilaogy Semalt dia azo alaina ho an'ny olona rehetra izay mila fampahalalana sarobidy momba ny SEO hatramin'ny fototry ny vaovao farany amin'ny indostria.
Ao amin'ny foibe fanampiana an'ny Semalt, dia afaka mahazo fanampiana ianao raha sendra mifikitra mafy.
Te-hahazo vola kely ve ianao? Semalt dia norakofanao tamin'ny fandaharan-jereben'izy ireo izy ireo rehefa namidinao ny serivisy SEO topnotch.
Afaka mahita tranonkala 5000 mahery ianao izay nanjary nahomby kokoa noho ny Semalt. Tsy heverinao ve fa fotoana izao ny tranonkalanao ao anatin'io lisitra io?
ALOHANO INDRINDRA miaraka amin'ny SEMALT
Semalt dia sosialy. Azonao atao ny mifandray aminy amin'ny haino aman-jery sosialy, mailaka ary ny hotline misy azy ireo ihany koa. Azonao atao ny mitete amin'ny alàlan'ny adiresy ara-batana ihany koa raha eo akaikinao ianao.
Tsy misy afaka mandà ny zava-misy fa Semalt dia natokana tanteraka amin'ny fahombiazan'ny mpanjifany amin'ny famolavolana fitaovana matanjaka nomen'izy ireo. I Semalt no antoka fa ny valin'ny vahaolana vahaolana ho an'ny zavatra rehetra misy ifandraisany amin'ny SEO. Azo antoka fa eo am-pelatanana ny orinasanao.